Mumongi uyo akatengesa wake Ferrari | Zvazvino Zvinyorwa
Mumonki Ndiani Akatengesa Ferrari Yake
Iye monk Akatengesa Ferrari Yake ibhuku rinozivikanwa repasi rose rekuzvibatsira rakanyorwa nemukurudziri mutauri uye munyori Robin Sharma. Rakadhindwa muna1999 neboka reHarper Collins Vaparidzi, rakatengeswa munyika dzinopfuura makumi mashanu uye rakashandurwa mumitauro inodarika makumi manomwe. Kusvikira 50 pakanga paine anopfuura mamirioni matatu emakopi akatengeswa e Iye Monk Akatengesa Ferrari Yake (muChirungu).
Chinyorwa chakavakirwa pane zvakaitika kune iye munyori Canada yenyika. Sharma, pandakanga ndiine makore makumi maviri nemashanu, akafunga kusiya zvake nomukurumbira carrera gweta kunyura en kutsvaga pachawo. Mhedzisiro iyi inzira yekuzvitsvaga yakashandurwa kuita ngano yebhizimusi iyo yaaida kugovana nenyika uye yakamutsa nhevedzano.
1 Kuongorora uye kupfupisa kweMonki uyo akatengesa wake Ferrari
1.1 Nzira yegweta
1.1.1 Munhu ane zvese muhupenyu?
1.1.2 Chiitiko ichi
1.1.3 Kudzoka kwemonaki
1.1.4 Iko kushandurwa
1.1.5 Maitiro eSivana
1.2.1 Hupenyu hwehupenyu zvinoenderana nemhando yemifungo
1.2.2 Chinangwa chehupenyu (Dharma)
1.2.3 Simba reranga
1.2.4 Zvipire kushandira vamwe uye nyudza iwe mune izvozvi
2 Matekiniki uye maekisesaizi akatsanangurwa mubhuku
3.1 Kuzvarwa, hudiki uye zvidzidzo
3.2 Robin Sharma, munyori
3.2.1 Mamwe mabhuku akaburitswa naRobin Sharma
Kuongorora uye pfupiso ye Iye monk Akatengesa Ferrari Yake
Munhu ane zvese muhupenyu?
Julian Mantle, gweta reHarvard Law School rakapedza kudzidza gweta, airatidzika kunge aine zvese muhupenyu. Ndezvipi zvimwe zvaungabvunze? Mubhadharo wake waipfuura miriyoni yemadhora pagore, aigara mune yemumba inoshamisira uye aive neakatsvuka tsvuku Ferrari. Zvisinei, kuonekwa kwainyengera: Jasi raive pasi pekushushikana kwakawanda nekuda kwekuremerwa nebasa.
Kunyangwe pahutano hwake hwairamba huchipera, protagonist akagamuchira makesi ari kuramba achiomarara uye anodenha. kusvikira rimwe zuva akasungwa moyo mumatare akazara. Mushure mekupunzika ikoko, Mantle akamira kuita mutemo., Akanyangarika yehupenyu hweveruzhinji nevamwe vake kufemu kwaaishanda, havana kumuona zvakare. Makuhwa akataura kuti akange aenda kuAsia.
Iye monk uyo akatengesa yake ...
Chokwadi chaive icho gweta akatengesa zvinhu zvake zvoumbozha nemotokari yake, Zvese izvi kuti uwane chimwe chinodarika chinoreva hupenyu hwako. Mushure memakore matatu, Mantle akadzokera kufemu kwaaishanda; akashandurwa, achipenya, airatidzika kunge akagwinya, akazara nemufaro. Ikoko, akarondedzera kune vaaimboshanda navo kuti akatenderera India uye akadzidza nezvevamwe ma yogi avo vaisachembera.
MuKashmir, Jasi rakasangana nemuzivi weSivana ndiani akaikurudzira a enderera nzira yako kusvika kuHimalaya. Pakati pemakomo akakwirira pasirese, protagonist yakasarudza kugara uye kugara nemamwe mamonki - varume vakachenjera veSivana. akazviwana.
Yogi Ramán akagovana ruzivo rwake rwese neaimbova gweta. Nenzira iyoyo, Mantle akadzidza kuchengetedza simba rake kutungamira hupenyu huzere noutano, izere nepfungwa dzekugadzira uye dzinovaka. Mamiriro ezvinhu chete akaiswa natenzi pakudzidza kwake ndeyekuti wekupedzisira anofanirwa kudzokera kunzvimbo yake yebasa yekare agovane zvirevo zveSivana nzira.
Pakati pebindu yakanaka kwazvo uye yakadzikama zvakasikwa, pakanga paine imba hombe yemwenje tsvuku kubva mairi yakauya yakanyanya kureba uye inorema jusi murwi. Murwi aingopfeka tambo diki yepingi yaivhara nhengo dzake dzakavanzika. Paakatanga kufamba-famba mubindu, akawana chronograph yegoridhe yakasiiwa neumwe munhu ipapo.
Nguva pfupi yapfuura, murwi akatsvedza ndokudonha akafenda. Pakumuka, akatarisa kuruboshwe rwake ndokuona mugwagwa wakafukidzwa nemadhaimaniiyo nzira inoenda kumufaro uye hupenyu hwakazara…). Pakutanga kuona iyi ngano inoita senge ingano yekunyepedzera, isina chirevo. Nekudaro, yega yega yezvinhu zveiyo nyaya ine chirevo chine simba pamwe nemakiyi akatsanangurwa pazasi:
Hupenyu hwehupenyu zvinoenderana nemhando yemifungo
Ngano yemurwi wejusi inoratidza izvozvo kugona kwepfungwa kwakakosha kuti utungamire hupenyu hwakazara. Kunyangwe zvikanganiso uye kudonha (kutambudzika) zviri chikamu chehupenyu, vanhu havafanirwe kukurirwa ne negativity. Pane kudaro, munyori anokurudzira kuratidzira tarisiro kuburikidza nekugona kwepfungwa.
Mune ngano yemurwi wejusi, panowanikwa mwenje mutsvuku, kubva panobuda hunhu uhu. Uku kuvaka kunomiririra tarisiro inofanirwa kuve nevanhu kuti vabudirire yavo Dharma. Ndokureva, iro gamba rako pachako basa rinokwanisika chete kuburikidza nekucherechedzwa kwemunhu zvipo nezvipo, pamwe nekugamuchirwa kwekutya kuitira kuti utarisane nekuvakunda.
Nguva inofanira kutarisirwa nehana. Mungano zvipfeko zvishoma zvemurwi wejusi zvinomiririra kuzvidzora. Panyaya iyi, iyo nzira yeSivana inotsanangura kuti mhiko dzekunyarara kwenguva yakareba dzakanakira kusimbisa kuda kwevanhu.
Saizvozvowo, wachi yegoridhe mucherechedzo weruremekedzo urwo nevarume vakachenjera pakubata kwavo nguva. Nekuti munhu anokwanisa kushandisa nguva yake munhu anokwanisa kubata hupenyu hwake uye kunakidzwa nhambo dzese dzayo. Uine izvi mupfungwa, zvakakosha kuti udzidze kuti "kwete" kudzivisa kutambisa nguva pane zviitiko zvisingadiwe uye kuronga zuva rako zvakanaka.
Zvipire kushandira vamwe uye nyudza iwe mune izvozvi
Iyo "pano uye ikozvino" ndiyo inonyanya kukosha nguva yezvose; Chete nenzira iyi ndipo panogona kukosheswa hupfumi hwechokwadi (madhaimani) enzira yehupenyu. Pamusoro pe, kuita kuti nguva yega yega ive nemubairo, vanhu vanofanirwa kuzvipira kushandira vamwe Pasina kutarisira chero chinhu kudzoka. Panyaya iyi, mamonki akaudza Mantle kuti "nekubatsira vamwe unonyatsozvibatsira."
Matekiniki uye maekisesaizi akatsanangurwa mubhuku
Moyo we rose, kurovedza muviri mukutapa kuti ukunde pfungwa;
Matanho Mashanu ekujekesa uye Kupfupikisa Zvinangwa:
Tora mufananidzo wepfungwa
Iwo "mashiripiti 21 zuva kutonga" kwekugadzira hutsika hutsva
Nakidzwa nemaitiro ese;
Iyi tsika gumi dzehupenyu hunopenya:
Tsika yeruzivo rwakawanda
Tsika yekuratidzira kwako pachako
Iyo inokurudzira mantra (inotaurwa izwi tsika)
Kuzvidzora: kusataura kwezuva rose;
Maminitsi gumi nemashanu ekuronga zuva nezuva uye awa rimwe rekuronga vhiki nevhiki;
Kufungisisa kwemazuva ese kwemaitiro ekuratidza rudo, kubatsira vamwe, nekutenda mazuva ese.
Kuzvarwa, hudiki uye zvidzidzo
Robin Sharma akaberekerwa muUganda muna 1965. Iye mwanakomana wababa wechiHindu uye amai veKenya. Vakamuendesa kuPort Hawkesbury, Canada, paakanga achiri mudiki kwazvo. Ikoko akapedza hudiki hwake uye chikamu chikuru chehudiki hwake, panguva iyo yaakazvipira kudzidza Biology. Gare gare, Akawana Master of Laws degree kubva kuDalhousie University, Nova Scotia.
Muimba iyoyo yezvidzidzo akadzidzisa makirasi emutemo uye akatanga kukudziridza hunyanzvi hwekutaura. Pakupedzisira, se akava gweta rine mukurumbira kudzamara afunga kutora shanduko muhupenyu hwake uye kusiya basa rake rezvemutemo. Nhasi, Sharma ine mukurumbira munyika zhinji nekuda kweakawanda ake ekukurudzira uye ehutungamiriri hurukuro.
Robin Sharma, munyori
Kutanga kwaSharma mukudhinda kwaive nemwero. Chinyorwa chake chekutanga chaive Megaliving! Mazuva makumi matatu kune Hupenyu Hwakakwana (1994), yakazviburitsa-yega ndokugadzirisa naamai vake. Bhuku rake rechipiri - zvakare rakazviburitsa muna 1997 - raive Iye monk Akatengesa Ferrari Yake.
Bhuku remonaki ibhuku reprozi ine autobiographical maficha panzira yekukura pamweya wegweta akatsunga kukurira hupenyu hwake hwezuva nezuva hwezvinhu. Iyi nyaya yakanyatso kuzivikanwa mushure mekunge Ed Carson, aimbova purezidhendi weHarper Collins, "awana" zvinyorwa mune chitoro cheCanada. Zita iri raizotangwazve muna 1999.
Mamwe mabhuku akaburitswa naRobin Sharma
Makiyi masere ehutungamiriri hwemonki akatengesa Ferrari yake (Hutungamiri Huchenjeri kubva kuMonki Akatengesa Ferrari Yake, 1998);
Ndiani achakuchema iwe paunofa? (Ndiani Achachema Paunofa: Hupenyu Zvidzidzo kubva kuMonki Akatengesa Ferrari Yake, 1999);
Iye mutsvene, surfer uye mukuru (Iye Musande, Surfer, uye CEO, 2002);
Mutungamiri anga asina chinzvimbo (Mutungamiriri Aive Asina Chinyorwa, 2010);
Tsamba dzakavanzika kubva kumonki akatengesa Ferrari yake (Tsamba Dzakavanzika Dzemumoni Ndiani Akatengesa Ferrari Yake, 2011);
Kukunda (Diki Diki Bhuku reBudiriro Inoshamisa, 2016);
Iyo 5 am kirabhu (Iyo 5 AM Kirabhu, 2018).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Iye monk Akatengesa Ferrari Yake